INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ibone ngokufana neNkulu kwelezibhamu - Bayede News
Ukuhlamba izandla kungahlenga impilo yabaningi
Mhla zingama-22 kuMbasa wezi-2021 iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala imile esinqumweni seNkantolo Enkulu yaseGauteng esigabeni sasePretoria sokuchitha isicelo senkampani yonogada esimayelana namalayisense ezibhamu zayo.
Kufikwa lapha nje, iFidelity Security Services (Pty)Ltd, okungenye yezinkampani zonogada ezinkulu ezweni, yafaka isicelo eNkantolo ikhulekela ukuthi iphoqe amaphoyisa ukuba ayivumele ukuvuselela amalayisense ezibhamu ezingama-750 kweziyizi-8 500 ezisebenzisayo eyesephelelwe yisikhathi.
Le nkampani ibhaliswe ngaphansi koMthetho Olawula Izibhamu uNombolo 60 wezi-2000 ukuze ikwazi ukusebenzisa lezi zibhamu.
NgokweSigaba 27 salo Mthetho, isikhathi esisemthethweni selayisense yesibhamu sibekelwe iminyaka ethile. IZigaba 24 nesama-28 zalo Mthetho zivumela ukuvuselelwa kwamalayisense ezibhamu nokunqanyulwa kwawo ngokwehlukana.
Ikakhulukazi, iSigaba 24 sithi ofisa ukuvuselela ilayisense yesibhamu kufanele okungenani ezinsukwini ezingama-90 ngaphambi kokuba ilayisense iphelelwe yisikhathi, afake isicelo sokuvuselela kuRegistrar of Firearms.
Ngakolunye uhlangothi iSigaba 28 sithi ilayisense ekhishwe ngaphansi kwalo Mthetho iyanqanyulwa uma sekuphele isikhathi esibekwe ngaphansi kweSigaba 27 ngaphandle uma ivuseleliwe ngokweSigaba 24.
IFidelity yehluleka ukuvuselela amalayisense ezibhamu zayo njengoba kuyalela iSigaba 24 okwaholela ekutheni ukusetshenziswa kwalawa malayisense kumiswe.
Le nkampani yabe isizama ‘ukuvuselela’ amalayisense ayo emveni kokuba esephelelwe yisikhathi kodwa amaphoyisa asenqaba isicelo sayo ngelokuthi akuvumelekile kunoma ubani ilayisense yakhe esinqanyuliwe ukuyivuselela ngokweSigaba 24.
IFidelity yazama ukufaka isicelo esisha kodwa amaphoyisa asichitha futhi.
Lokhu kwaholela ekutheni le nkampani ibabele eNkantolo ifuna ukuba iyalele amaphoyisa ukuthi amukele isicelo sayo esisha, ivimbele amaphoyisa ukuba ayeke ukushaqa izibhamu amalayisense azo asephelelwe yisikhathi futhi ukuqhubeka ukuphathwa kwazo yile nkampani obese kungekho emthethweni nokuwayalela ukuba akhiphe amalayisense esikhashana ngokweSigaba 21 mayelana nezibhamu amalayisense azo asephelelwe yisikhathi.
INkantolo Enkulu yasichitha isicelo seFidelity ngelokuthi sasingahluzile.
IsiseNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala iFidelity yakulaxaza eyabe ikukhulekela ngaphandle kwesicelo sokuthi amaphoyisa aphoqwe ukuba amukele isicelo sayo esisha.
Ummangalelwa wakuphikisa lokhu emi kwelokuthi le nkampani ayikufanelwe ukunikwa lokhu ekufunayo ngoba yehlulekile ukuvuselela amalayisense ayo okungenani ezinsukwini ezingama-90 ngaphambi kokuba amalayisense okukhulunywa ngawo aphelelwe yisikhathi.
INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala yakuchitha lokhu ithi akukho eMthethweni okuvimbela iFidelity ukuthi ifake isicelo samalayisense ezibhamu amasha asephelelwe yisikhathi.
INkantolo yagcizelela ukuthi le nkampani engeke yakwazi ukukwenza ukufaka isicelo sokuvuselela amalayisense ngokweSigaba 24 soMthetho asevaliwe ukusetshenziswa kulandelwa iSigaba 28. Kepha, iNkantolo yama ekutheni le nkampani ayifanelwe ukunikwa lokhu ekuqaleni eyayikukhulekele eNkantolo Enkulu. Yabe isivumelana nesinqumo seNkantolo Enkulu sokuchitha isicelo seFidelity.
Le nkampani yayalelwa ukuba ikhokhe izindlelo zesicelo sokwedluliswa kwecala kuya ziyisi-5 kuNdasa wezi-2021 lapho eyalaxaza ezinye zezicelo zayo.
INkantolo yathi iFidelity ifanelwe kuphela yizindleko zecala ezimayelana nokulalelwa kodaba mhla zili-11 kuNdasa wezi-2021.
nguSabelo Mbatha May 7, 2021